Ngathi | I-Hangzhou Zkong Networks Co, Ltd.
Ii-ESL zethu zikulungele ukusetyenziswa kubuchwephesha beBluetooth kunye ne-NFC, umzobo opheleleyo, kunye nemiboniso emithathu-yemibala. Ngaphandle kokubonisa iinkcukacha zemveliso ezinje ngexabiso, istokhwe, kunye nokunyusa, sinokwenza ngokwezifiso iilebheli kulo naluphi na ulwazi olubonakalayo kunye nezitayile zemilo ezifuna.
Ngobuchwephesha obuphambili besakhiwo sefu kunye nonxibelelwano olungenazingcingo, iZkong ihlangabezane ngokugqibeleleyo neemfuno ezahlukeneyo zamawaka eevenkile kwihlabathi liphela, kwaye ibancede baphile kumceli mngeni wentsebenzo ephantsi, intlawulo yexabiso eliphakamileyo, ukuthengisa okurhabaxa okusisiseko kunye nokunyuka kweendleko zokusebenza. .
Isungulwe kwimveliso yeelebheli ezishelfini ze-elektroniki (ii-ESLs), siyakhula njengenkampani ekhokelayo ebonelela ngezixhobo ze-IoT kunye neqonga lamafu elihambisa iseti epheleleyo yezisombululo kunye neenkonzo. Isisombululo sethu esitsha linyathelo eliphambili kwiivenkile ezinobuchule zokuguqula ukusuka kwizitena zemveli kunye nodaka luye kwishishini le-Omnichannel. Kwaye siyaxhamla abathengisi kunye nabathengi kumava angcono asesitolo, apho, abathengi banokufumana amaxabiso, ukunyusa, amanqanaba esitokhwe, uphononongo lwentlalo, kunye nalo naluphi na ulwazi abalulindeleyo kwishelufa, kwaye abathengisi banokufumana ukuqonda kwabathengi kwangoko kwidatha enkulu kwaye baphucule ukuthengisa kwabo ngendlela efanelekileyo ngakumbi neyonga iindleko.
Kule minyaka ingaphezulu kwe-15, siphumelele irekhodi yeshishini ebalaseleyo, kwaye sakhonza abathengi abavela kumazwe angama-35. Sisebenza ngokubambisana ngokusondeleyo kunye neyona ntengiso inkulu ehlabathini, njengeAlibaba Group, iLenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-inki, iQualcomm, nezinye ezininzi.
Olwethu uluvo kukufaka iileyibhile ezishelifini zamafu ze-elektroniki (ii-ESL) zeVenkile nganye yeSmart. Umnqophiso wethu kukwandisa uthungelwano lweshishini olunengeniso kwilizwe liphela. Samkela amaqabane kwihlabathi liphela ukuseka intsebenziswano enzulu, kwaye sikulungele ukukhulisa ukuthengisa kwakho kunye nokwandisa umda wakho ngezisombululo eziphuhlisiweyo.
Vumela iivenkile ezingama-3000 zokusebenzisana ukuba zikwazi ukushiya iilebheli zamaphepha emveli kwaye zithethe ngqo ezishelfini.